Nyefee iCloud Ndi ana-akpo ka Android
Mgbe ịmafe si iPhone ka gam akporo igwe, olee otú ị nyefee mkpa data dị ka kọntaktị na a ọhụrụ ekwentị? Ọ bụrụ na kọntaktị ndị dị mkpa, na ị na-achọghị iji aka tinye kọntaktị otu otu. iPhone nwekwara adịghị ekwe ka mfe nyefe nke kọntaktị na Android usoro. Otú ọ dị, e nwere ụzọ ole na ole na ike ga-eji nyefee gị kọntaktị na Android.
1. Freeway: Iji iCloud na Gmail.
2. Easyway: Jiri nke ọzọ software ime ka nyefe.
3. égwu: Jiri Android apps ka ịnweta kọntaktị.
Na usoro a, anyị ga-nyefee kọntaktị site na iCloud ka Gmail, nke n'ikpeazụ syncs ọ na ọhụrụ gị na Android ekwentị. Na-esonụ bụ nzọụkwụ na i nwere ike iji
1. Wee na gị iCloud akaụntụ site na icloud.com. Ugbu a họrọ niile kọntaktị gị na-aga ntọala. N'okpuru Ntọala, ị ga-ahụ Export vCard nhọrọ. Zọpụta exported faịlụ ka ihe kwesịrị ekwesị na ọnọdụ na gị na kọmputa.
2. Ugbu a gaa gị Gmail akaụntụ na-aga Ndi ana-akpo menu.
3. N'oge ọhụrụ window, na-aga ihe kọntaktị site n'aka ekpe panel. Ugbu a họrọ exported vCard na bulite ya. Ugbu a, i nwere iji họrọ "Import. Ahọpụta ibubata ga tinye kọntaktị gị Google akaụntụ.
Na-eji otu Google ID ka mmekọrịta gị google kọntaktsị na gị Android. Ọ bụrụ na ị nwere akpaka mmekọrịta on, ihe niile ị chọrọ ime bụ na-na ngwaọrụ na; ekwentị gị ga-eme ya n'ihi gị.
Nyefee gị iCloud kọntaktị na MobileTrans
Wondershare MobileTrans Dị ukwuu software maka ebufe gị iCloud data gị Android ngwaọrụ. Ọ bụ zuru ezu 1-click ekwentị transfer software.
Atụmatụ nke MobileTrans
1. Ọ bụ zuru ezu narị percent mma na n'ihe ize ndụ-free.
2. Ị nwere ike nyefee media gụnyere na kọntaktị na ozi ederede. I nwekwara ike nyefee videos, music na oku na ndekọ.
3. Nyefee nwere ike ịbụ n'etiti iOS, Nokia Symbian na Android ngwaọrụ. Ọ na-akwado ihe karịrị 3000 igwe na dị iche iche na netwọk.
4. Mfe interface, nke na-eduzi na usoro na ọ na-ewe nanị abụọ-atọ nkeji.
Nyefee kọntaktị na ụzọ dị mfe
1. Download na wụnye MobileTrans. Ugbu a jikọọ gị Android gị na kọmputa site na eriri na-emeghe software. Ugbu a họrọ nhọrọ "Weghachi Site Backups".
2. họrọ iCloud akara ngosi. On ọzọ scree, ị ga-banye na gị iCloud Akaụntụ na-ekwe ka software ịchọpụta gị iCloud ndabere faịlụ.
3. n'aka ekpe nke window, ị ga-ahụ ndepụta nke faịlụ. Ugboro abụọ pịa iCloud ndabere faịlụ. A popup ga-egosi na ihuenyo na-arịọ maka ikike maka nbudata na faịlụ. Nabata popup ka download amalite.
4. Ugbu a họrọ kọntaktị site n'etiti window - mkpa ka ị pịa Malite Detuo. Na sekọnd ole na ole, gị faịlụ ga-synced ka Android Ngwaọrụ.
Iji Android ngwa nyefee iCloud kọntaktị na Android
E ole na ole android ngwa na-enye gị ohere nyefee kọntaktị site na iCloud ka Android ekwentị. Ngwa ọdịnala dị ka SmoothSync, mmekọrịta maka iCloud kọntaktị, na iCloud kọntaktị mmekọrịta.
Ọ bụ otu n'ime ndị na-ewu ewu ngwa ọdịnala na ahịa na i nwere ike iji ngwa nyefee kọntaktị.
1. Site Isetịpụ gaa tinye ihe na akaụntụ. N'okpuru ị ga-ahụ SmoothSync n'ihi na ígwé ojii kọntaktị. Ugbu a abanye n'ime gị iCloud akaụntụ.
2. Ugbu a, dị nnọọ ekwe ka mmekọrịta na-amalite site ịmafe na mmekọrịta on.
E nwere ọtụtụ ọnọdụ na i nwere ike tweak ma ihe niile dị mfe na software eme ihe niile n'ihi na gị.
Mmekọrịta maka iCloud Ndi ana-akpo
Ọ dị mfe ka mmekọrịta iCloud kọntaktị na mfe ụzọ. A bụ ihe ọzọ na-ewu ewu usoro na arụ ọrụ dị ukwuu na gam akporo ngwaọrụ. Ebe a bụ otú i nwere ike iji nke a ngwa nyefee kọntaktị.
1. Mepee ngwa mmekọrịta maka iCloud Ndi ana-akpo na-emeghe Ígwé ojii na akara ngosi na abanye n'ime gị Apple ID na i nwere si na mbụ. Ugbu a, enweta na Ndi ana-akpo.
2. Ugbu a họrọ ma ị chọrọ ka mmekọrịta kọntaktị niile n'etiti ekwentị gị na iCloud ma ọ bụ nanị chọrọ ka mmekọrịta iCloud kọntaktị. Nke a ga-tinye kọntaktị gị Android.
App na-akpaghị aka syncs kọntaktị na ihe ọ bụla ukwuu, a chọrọ n'aka gị n'akụkụ.
iCloud Ndi ana-akpo mmekọrịta
iCloud Ndi ana-akpo mmekọrịta bụ ihe ọzọ na powerfrul maka ebufe iCloud kọntaktị gị Android ngwa. Lee ndị dị mfe nzọụkwụ nyefee kọntaktị gị.
1. Dị ka ihe ọ bụla ọzọ na-eji ngwa dị nnọọ emeghe ya ma tinye gị iCloud akaụntụ.
2. ugbu a na ha na akaụntụ site na mwube mmekọrịta etiti oge. Software ga-akpaghị aka mmekọrịta kọntaktị gị iCloud na gị Android ekwentị.
Kọntaktị gị nwere ike inweta na-edekwa iji otu software. Ọ bụ mfe ma dị mfe na-arụ ọrụ na.
Onye ọ bụla usoro maka ebufe kọntaktị na Android ndị dị irè, ma ụfọdụ na-obere ọrụ. Free ụzọ usoro ọ chọrọ obere mgbalị tụnyere ndị ọzọ abụọ ụzọ. The ọzọ software na-enye gị ihe akara n'elu data na ị chọrọ ka mmekọrịta. Dị ka mmekọrịta iCloud kọntaktị na Android bụ nchegbu, Android ngwa ọdịnala ndị kacha mma. Ha na-arụnyere na ngwaọrụ onwe ya, na mkpa ka ị na-abanye Apple ID. Ke adianade do, ndị a ngwa ọdịnala na-enye ọzọ nhọrọ dezie kọntaktị. Ọ bụrụ na ị na-achọ mfe na ngwa ngwa usoro, na-eji Android ngwa.
> Resource> iCloud> 3 Ụzọ nyefee iCloud Ndi ana-akpo ka Android